Woldorgommii atleetiksii Siwiizerlaanditti ta’een Yoomiif Qajeelchaa 2ffaa ta’uun xumure; Siifan Hasan moo’atteerti - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Woldorgommii atleetiksii Siwiizerlaanditti ta’een Yoomiif Qajeelchaa 2ffaa ta’uun xumure; Siifan Hasan moo’atteerti
Woldorgommii atleetiksii Siwiizerlaanditti ta’een Yoomiif Qajeelchaa 2ffaa ta’uun xumure; Siifan Hasan moo’atteerti
Yoomiifi Qajeelchaafi Mo Faraah
Gama atleetiksiitiin dirree Lausanne (Siwiizerlaand ) irratti wolmorkii oo’atu ture; guyyaa kaleessaa. Atleetonni keenya fiigicha gosa hedduu irraa qooda fudhatan. Irra jireessatti garuu qalbii guutuun kan eeggamaa ture fiigicha mt 5000 worra dhiiraafi mt 1500 dubartootaa jiddutti geggeeffame ture. Hedduun atleetota keenyaas kan hirmaatan isuma lamaan kana irrati. Meedaaliyaan argame hedduu miti. Morkiin garuu hedduu kan qalbii nama hawwatuufi kan abdii atleetota keenyaa gara funduraa irratti calaqqise ture.
Fiigicha meetira 5000 tiin atleeticha lafaadhufaa Yoomiif Qajeelchaafi Mo Faaraah tu dirree irratti wolitti baye. Atleet Yoomiif Mo Faraahf hanga daqiiqaa dhumaatti harka hinlaanne ture. Dhumarratti garuu Mo Faaraah miilaafi anniisaa qabutti muuxxannoo dirree irraa isa yeroo dheeraa itti dabalatee Yoomiifiin sekondii tokkoon dursee sarara ce’uu danda’eera. Mo Faaraah marraa kana moo’atus yeroo biraatti harka Yoomiif Qajeelchaatti kufuun isaa kan hin hafne ta’uu fiigichi kaleessaa ifatti mul’iseera; isa kanaaa ilkaan ciniinnateeti kan moo’ate. Fiigicha mt 5000 kanaan 3ffaa ta’ee kan raawwate atleetii Keeniyaa Soo’i Edwiin Cheruyoot dha.
Tibbana, maqaan Mo Faaraah dhimma dawaa humna laatuun wolqabatee ka’aa jiraachuun isaa niyaadatama.
Atleet Siifan Hasan
Wolmorkiin mt 1500 jidduu dubartootaatti geggeeffames hedduu cimaa ture. Atleetonni Itoophiyaa bakka bu’anii fiigan milkaayuu dhabanis, Siifan Hasan, atleetiin beekkamtuun Oromoo biyya Nezerlaandiif fiigdu injifannoo ol’aanaa galmeessisuun meedaaliyaa mormatti diratteerti. Siifan Hasaniin moo’atamanii sadarkaa 2ffaafi 3ffaa irratti kan gataman Feeyiz Chepengetich Kipyegon (Keeniyaa) Jeenii Simsan (USA) dha.
Fiigicha mt 800 irratti atleet Amaan Mohaammad hirmaatus moo’achuu hindandeenne. Injifannoon kan kufe harka atleetii Botswaanaa Nijeel Amoosiitti. Yeroo dhihoo as abbaa fiigicha mt 800 fakkaataa kan dhufe atleetiin Keeniyaa Deviid Rudishaan moo’atamee gara sadarkaa 2ffaatti gadi dhiibameera.
Previous articleItoophiyaan Raayyaa Woraana biyyattii 3000 oli Somaaliyaatti bobbaaste
Next articleTaphataan Riyaal Maadriid Iker Kasiyyaas Poortoof mallatteessuuf